Tag: sawirada emaylka | Martech Zone
Tag: sawirada emaylka
Sida loo Hirgeliyo Helitaanka Emailka ee Teknolojiyada Caawinta
Talaado, Janaayo 29, 2019 Axad, Febraayo 3, 2019 Douglas Karr
Waxaa jira cadaadis joogto ah oo loogu talagalay suuqleyda inay dejiyaan oo ay hagaajiyaan tiknoolajiyaddii ugu dambeysay iyo kuwo badan oo halgan ugu jira inay sii socdaan Farriinta aan marar badan ka maqlo shirkad kasta oo aan la tashado ayaa ah inay iyagu ka dambeeyaan. Waxaan u xaqiijinayaa iyaga in kasta oo ay ahaan karaan, sidaas oo kale qof walba oo kale. Teknoolojiyaddu waxay ku socotaa xawaare aan kala go 'lahayn oo aan macquul ahayn in lala socdo. Teknolojiyada Caawinta Taasi waxay tiri, in badan oo ka mid ah teknoolojiyadda internetka ayaa la dhisay
Khuraafaadka Suuqgeynta Emailka ee 15-ka Ugu Sareysa Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Jimco, Diisambar 12, 2014 Jimco, Diisambar 12, 2014 Douglas Karr
Sanadkii la soo dhaafay, waxaan wadaagnay faahfaahin la yaab leh oo bixisay 7 khuraafaadka suuqgeynta emailka. Fikradayda, emaylku wuxuu sii ahaanayaa mid ka mid ah hababka isgaarsiinta ee aan la qiimeynin, loo isticmaalay loona isticmaalay xadgudubka celceliska suuqyadu ay ku hayaan. Waqtigan xaadirka ah, Email Monks ayaa liis garaacay 15 khuraafaad oo caan ku ah suuqgeynta iimaylka oo ay ku tirtireen fikradaha macquul ah ee ku jira "Khuraafaadka Suuqgeynta Emailka Busting" Infographic. Infographic wuxuu iftiiminayaa runta ka dambeysa khuraafaadyadan